ရက်ရှောင်တာ အလုပ်ဖြစ်မယ်ထင်လား | သိလိုရာမေး
ဒေါက်တာဒိအားမေးရန်	: ရက်ရှောင်တာ အလုပ်ဖြစ်မယ်ထင်လား
ပုံမှန်လိင်ကိစ္စတစ်ခုရှိနေတဲ့ အိမ်ထောင်သည်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အတူနေချစ်သူရည်းစားတွေပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်မတိုင်သေးခင်မှာ ကိုယ်ဝန်ရမသွားဖို့ဆိုတာက အရေးကြီးပါတယ်။
ခေတ်မီသားဆက်ခြားနည်းလမ်းတွေ ခေတ်မစားခင် အချိန်ကတည်းက လူသိများတဲ့ နည်းလမ်းကတော့ သဘာဝအတိုင်း ရက်တွက်ပြီး အတူနေတာ အင်္ဂလိပ်လို Calendar Method လို့လဲ ခေါ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဒီနည်းလမ်းက တကယ်ရော အလုပ်ဖြစ်ရဲ့လား? ဒီလို အတူနေပြီး ကိုယ်ဝန်ရသွားရင်ရော ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် သိလိုရာမေးကနေ သဘာဝအတိုင်း ရက်တွက်ပြီးအတူနေတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပြောပြပေးသွားချင်ပါတယ်။
Calendar Method ဆိုတာဘာလဲ?
ဒီနည်းလမ်းရဲ့သဘောက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ရာသီစက်ဝန်းတစ်ခု နဲ့ တစ်ခုကြား အချိန်ကာလကို စောင့်ကြည့်ပြီး သားဉကြွေလောက်မယ့့် ရက်ကို ရှောင်ပြီး အတူနေတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီနည်းလမ်းကို မသုံးခင်မှာ ကိုယ့်ရာသီစက်ဝန်းတစ်ခု နဲ့ တစ်ခုကြာချိန်အတိုင်းအတာကို အနည်းဆုံး ၆ လ စောင့်ကြည့်ထားတဲ့သူဖြစ်ရပါမယ်။ ဒါမှသာ ဒီနည်းလမ်းကို သုံးတဲ့အခါ ထိရောက်မှုပိုရှိနိုင်မှာပါ။
သားဉကြွေနိုင်မယ့် ရက်ကို ဘယ်လိုတွက်ရမလဲ?
တွက်တဲ့နည်းကတော့ အရင်လက ရာသီလာတဲ့ ပထမရက်ကို ပြက္ခဒိန်ပေါ်မှာ အမှတ်အသားလုပ်ပါ။ ပြီးရင် ခုလအတွင်းမှာ ရာသီစလာတဲ့ပထမရက်ကိုလဲ အမှတ်အသားလုပ်ပါ။ အမှတ်အသားလုပ်ထားတဲ့ ရက်နှစ်ရက်ကြားထဲမှာ ရှိတဲ့ ရက်တွေအားလုံးကို ပေါင်းပါ။ ပေါင်းလို့ရလာတဲ့ ရက်တွေထဲကနေ ၁၈ ရက်ကို နုတ်ပါ။ နုတ်ပြီး ရလာတဲ့အဖြေကို ဒီလရဲ့ ရာသီစလာတဲ့ ပထမရက်က စပြီး ရေတွက်ပြီး ဆုံးတဲ့နေ့က သားဉကြွေရက်ပါ။
(ဉပမာ – အရင်လ ၁၀ ရက်နေ့ နဲ့ ခုလ ၁၁ ရက်နေ့တွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ရာသီစလာတဲ့ ပထမရက်တွေဆိုရင် အဲ့အချိန်ကာလနှစ်ခုကြားမှာ ပေါင်းလို့ရလာတဲ့ ရာသီစက်ဝန်းရက်ပေါင်းက ၂၈ ရက်ပါ။ ရလာတဲ့ ၂၈ ထဲက ၁၈ ကိုနုတ်ရင် ၁၀ ရပါတယ်။ ဒီတော့ ပြက္ခဒိန်မှာ ဒီလ ရာသီလာတဲ့ ၁၁ ရက်ကစပြီး ၁၀ ရက်တိတိကို ရှေ့ဆက်ရေတွက်သွားမယ်ဆိုရင် ၂၀ ရက်နေ့က သားဉကြွေတဲ့ ပထမရက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်က ၂၀ ရက်နောက်ပိုင်းမှာ အမျိုးသားနဲ့ အတူနေမယ်ဆိုရင်တော့ အကာအကွယ်အနေနဲ့ ကွန်ဒုံးသုံးပြီး အတူနေရမှာဖြစ်ပါတယ်)
အပေါ်မှာ ပြထားတဲ့တွက်နည်းက ရာသီစက်ဝန်း ၂၈ ရက်ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အတွက် ဉပမာထားပြီး တွက်ချက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းကို စနစ်တကျအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဝန်တားနိုင်တဲ့ ရာခိုင်နှုန်းက ၇၆ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၈၈ ရာခိုင်နှုန်းထိ ထိရောက်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက အသုံးပြုသူ ၁၀၀ မှာ ၁၂ ယောက်ကနေ ၂၄ ယောက်က ကိုယ်ဝန်ရနှုန်းရှိတယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။
ကောင်းကျိုး နှင့် ဆိုးကျိုး
ကောင်းကျိုးအနေနဲ့ကတော့ ခေတ်မီသားဆက်ခြားနည်းလမ်းတွေလို ငွေကုန်ကြေးကျမများသလို ဟော်မုန်းမတည့်တဲ့ ပြဿနာတွေမရှိနိုင်ပါဘူး။
ဆိုးကျိုးကတော့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ ကိုယ်တွင်းဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲတွေကြောင့် ရာသီစက်ဝန်း ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုအချိန်မျိုးတွေမှာ အခန့်မသင့်ရင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်တဲ့ ရာခိုင်နှုန်းများသွားနိုင်ပါတယ်။
Calendar Method (ရက်ရှောင်အတူနေနည်း) ကို အသုံးမပြုသင့်သူများ
တစ်လနဲ့တစ်လ တိကျတဲ့ ရာသီစက်ဝန်းမရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ
မျိုးဉကြွေလောက်တဲ့ ရက်တွေမှာ အကာအကွယ်မသုံးလိုသူ စုံတွဲတွေ
STIs လို လိင်မှတဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေကို ခံစားနေရတဲ့အတွက် မိန်းမကိုယ်ကနေ မူမမှန်သွေးမကြာခဏဆင်းလေ့ရှိသူ အမျိုးသမီးတွေ
အနည်းဆုံး ၄လ ကနေ ၆လအတွင်း ရာသီစက်ဝန်းကို စောင့်ကြည့်လေ့မရှိသူတွေ
ဒီလို သဘာဝအတိုင်း ရက်တွက်ပြီးအတူနေတဲ့နည်းလမ်းအပြင် တခြားသော သဘာဝအတိုင်း သားဆက်ခြားနည်းလမ်းတွေကို ဒီ Link မှာ ဝင်ကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်။